PJ မျက်နှာဖုံး: လရောင်သူရဲကောင်းများ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » PJ မျက်နှာဖုံး: လရောင်သူရဲကောင်းများ
PJ မျက်နှာဖုံး: လရောင်သူရဲကောင်းများ APK ကို
သင်သည်တတ်နိုင်သကဲ့သို့အများအပြား orbs စုဆောင်း, သင့်အကြိုက်ဆုံးသူရဲကောင်းနှင့်အတူဆော့ကစားရန်ဇာတ်ကောင်ကို၎င်း, moonlit ရရှိနိုင်ရန်အိမ်ခေါင်မိုးတလွှားနှင့်ညဥ့်မှတဆင့်ခရီးကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကနောက်တဖန်မကောင်းသောအကြံကိုမှတက်နေသောသူတို့အားဒုက္ခပေးတတ်တဲ့လူကြမ်းအဖြစ်သတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်!
အဆိုပါ PJ မျက်နှာဖုံးနေ့ကိုကယ်ဖို့ညဉ့်သို့, သူတို့ရဲ့လမ်းအပေါ်များမှာ!
• Collection orbs - သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးရမှတ်မှထည့်သွင်းဖို့ orbs စုဆောင်းပါ။
•ရွှေအဆောင်လက်ဖွဲ့ - သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးရမှတ်တိုးမြှင့်ဖို့လမ်းတလျှောက်တွင်ကိုရွှေအဆောင်လက်ဖွဲ့ကောက်။ သူတို့ရှာတွေ့ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုသင်အဘို့သင့်မျက်စိကိုထုတ်စောင့်ရှောက်သေချာပါစေ!
•ဘေးအန္တရာယ် - ထိုလူကြမ်းအဖြစ်၎င်းတို့၏လမ်းအတွက်ပစ်နေသောအတားအဆီးရှောင်!
အဆိုပါအရောင်အဆောင်လက်ဖွဲ့စုဆောင်းနှင့်သူရဲကောင်းများ '' အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ပေါ်:
• Catboy - အဆင့်မြင့်ခုန်နိုင်စွမ်း
• Owlette - က hidden orbs ကြည့်ဖို့စွမ်းရည်
• Gekko - အတားအဆီးမှတဆင့်တပ်များမှစွမ်းရည်
ဒီ app ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း 21 အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခု In-app ကိုဝယ်ယူမှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်ရ:
• 30 သစ်ကိုအဆင့်ဆင့်
အဆိုပါလူကြမ်းအဖြစ် featuring •3ဆုကြေးငွေအဆင့်ဆင့်
• Hidden ဒေသများ
အဆိုပါ PJ မျက်နှာဖုံး, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမိသားစုများသန်းပေါင်းများစွာတို့ကအသိမှတ်ပြု: လရောင်သူရဲကောင်းများနှင့်အတူစိတ်မိဘများငြိမ်းချမ်းရေးပေးသည်:
•ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိအန်းဒရွိုက် 4.0.3 နှင့်တက်ကိုထောကျပံ့
ကျနော်တို့ဒီ app ကိုတောင်ပိုကောင်းစေစူပါကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါတယ်:
• Gameplay တိုးတက်မှု
• In-App ကိုအရစ်ကျတိုးတက်မှု
PJ မျက်နှာဖုံး: လရောင်သူရဲကောင်းများ
94.32 ကို MB
PJ မျက်နှာဖုံး: အချိန်စေရန် ...